Kedu ka m ga-esi jikọta kiiboodu kwekọrọ? - Ndị Ọkwọ Ụgbọ Ala
Isi > Ndị Ọkwọ Ụgbọ Ala > Udidi keyboard ọkwọ ụgbọala - ihe ngwọta na
Udidi keyboard ọkwọ ụgbọala - ihe ngwọta na
Kedu ka m ga-esi jikọta kiiboodu kwekọrọ?
Esi re‑ụzọhubi with your remote ma obukiiboodu
Gbaa mbọ hụ na a kwadoro ogige ahụ. Chere 30 sekọnd mgbe mbụ ijikọ ya na ike ọkọnọ.
PịaMmakọ/ Tọgharia bọtịnụ na azụ nke ehiwe.
Dabere na gịMmekọrịtangwaahịa:MmekọrịtaPro, Elite, na Smart Control remotes: Pịa bọtịnụ menu & ogbi n'otu oge.
Gini bu YouTube! Agwara m gị na anyị ga-alọta na Fraịde a. Taa! Site na mbipụta ọhụrụ nke Talk Nerdy to Me! Taa bụ nnukwu ụbọchị. Nke kachasị mkpa, anyị na-eme ka ọdịiche dị n'etiti ederede TV dị egwu na isiokwu Philips Hue, kpakpando dabara.
Oh! Ọ bụ naanị Friday kacha mma! Ya mere mmanụ a honeyụ na-agwa m okwu dị mma, Nwa dị mma ihe anyị nwere ebe a bụ Logitech's Harmony Smart Keyboard. Nke a bụ ebe iwu maka ime ụlọ ezinụlọ gị. Nke a na-ewe ma na-akwado.
Ihe a niile! Enweghịzi njikwa dịpụrụ adịpụ! Nke ahụ dị mma n’ihi na echere m na ọ gbajiri ụfọdụ n’ime ha. Oh, mana ọ na-ewe ihe a niile wee gbakwunye ya ugbu a ị nwere ike ijikwa ihe niile site na TV gị na Xbox 360, PS3, AV receiver, na Blu-ray. Kọmputa gị kwa, ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nkeji oge! Xbox Xbox gị kwa. Xbox One kwa. Naanị m zụrụ ya! Ee, enwere oge izizi maka ihe niile.
Ma ị nwere ike ịhazi ya. Igodo atọ ahụ dị elu ebe a. Ma nwere ike ijikwa ngwaọrụ isii dị iche iche.
Nwere ike pịa ma jide maka a ngwaọrụ na otu click jikọọ a abụọ na ngwaọrụ ya. Nke a bụ otu ị ga - esi nye TV gị, Smart TV, ihe ọkpụkpọ Blu-ray na ngwaọrụ ndị ọzọ. ọ bụ kọmpat, ìhè, na-eche siri ike.
Na-eche dị ka ihe dị elu. O nwere ihe eji arụ ya nke dị ka ihe onye ọ bụla nwere na laptọọpụ ha ugbu a. Na-arụ ọrụ okpukpu abụọ.
Ha nwere isi ọrụ ha n’ebe a. Have nwere onye ndu gị. I nwere menu gi.
Have nwere nkwusi, egwu, na ndekọ nhọrọ. Njikwa olu. Ihe a na-aga nke ọma na onye nata AV m, yabụ njikwa olu m na-elekọta ya.
Ihe dị mma n'ezie bụ na enwere ngwa maka iOS na gam akporo na ekwentị m. Enwere m ike ijikwa TV na ekwentị m. Njikwa olu.
Enwere m ike ime ihe ọ bụla si ebe a. Budata ngwa ahụ. Ọ dị mfe melite.
Ọ ga-eduzi gị na ihe niile! Ma! Chọpụta ihe nwa ọ nwere ike ịbụ na ekwentị gị. Ọ bụ na ekwentị m. Amaara m na m debere ya.
Haha! Emere m etemeete m na ọ haziri m. Eeh. Ma ọ dị oke mma n’ihi na ịnwere ike ịnwe ya n’ọtụtụ ngwaọrụ ka ị mara na anyị abụọ nwere ya na ekwentị anyị.
Anyị nwekwara ya na iPad maka Michael. Agbanyeghị, uh, Amaghị m ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka ọ gbanwee chanel, mana, hey, gịnị ka ị ga - eme? Enwere njikọ na ala nke nkọwa ahụ n'ihi na ịchọrọ ịnwe ngwa ahụ ka ịtọlite ​​ihe niile, na Logitech nwere akụkọ ntọala mara mma na ya, yabụ na ọ baghị uru ma anyị abụọ kwuo maka ya maka na anyị gbasara ihe sitere na Okwu banyere ezigbo ndụ ndị ụlọ ọrụ anaghị agwa gị, dịka mgbe ọ naghị arụ ọrụ. Yabụ, ee, njikọ dị n'okpuru.
mperi koodu 0x80070571
Ihe m na-enweghị ike ikwu, m na-ekwu, m ga-atụ anya karịa chinchi, nsogbu ndị ọzọ na ụdị ihe ahụ. Ọ dekọrọ ngwaọrụ niile. Enweghi nsogbu ọ bụla na ya.
Ugbu a, anaghị m ekwu na ihe niile dị n'ebe ahụ dakọtara, mana oge! N'okpuru ebe a bụ njikọ maka ndepụta nke TV smart, n'ihi na ọ bụghị smart TV ọ bụla na-arụ ọrụ na anyị nwere Wi-Fi, dịka ọmụmaatụ. I choro igwe onyonyo nwere smart nke nwere IQ n’elu 165 iji rụọ ọrụ. Ya mere, lelee njikọ dị n'okpuru tupu ịzụta ya. $ 150 abụghị ihe ị ga-agbagharị naanị.
Ihe ọzọ dịkwa mma n'anya bụ ma ọ bụrụ na ịnwe ụlọ ọrụ TV nke ihe a nwere onye na-anabata infraredị ka ị nwee ike tinye ya na kọfị, dọpụta waya ahụ ma nwee igbe ahụ n'anya, naanị ndị nnata, um, nke na-egosi na ị ka nwere ike iji ya. Ọ bụrụ na TV gị anaghị arụ ọrụ bluetooth ka TV anyị anaghị arụ ọrụ Bluetooth, ha nyere gị ndị nnata USB abụọ, dịka ị ga-ahụ, ị ​​mara, òké Logitech ma ọ bụ keyboard ọ bụla. Naanị obere igwe okwu.
M tinyere ya n’azụ TV. TV dekọrọ ya ma enwere m ike ịmekọrịta ya na keyboard ozugbo. Otu ihe ahụ, enwere m ike ijikọ ya na Xbox anyị.
Enwere m ike itinye ya na ngwaọrụ ndị ọzọ ma anyị nwere ike iji ya na ha. Mana ha nyere gị abụọ n’ime ndị a ka ị nwee ike iji ha rụọ ọrụ karịa otu igwe. Enweghị mkpa ịdọrọ ya mgbe niile ma dọpụta plọg.
N'ikwu ya, ịnwere ike ijikọ ya na kọmputa ma jiri ya dị ka keyboard. Ndị a. Ndewonu onye oma m! Enwere m ike iji ya na-agagharị na youtube.
Know mara, mee obere ọrụ blog. Nke a bụ Horrasshousewife.com, ọ bụrụ na ịsoghị m.
Know mara, nkwụnye ihere. Ma na o nwere nke a n'ezie, n'ezie oyi mma! Oh Mma mma! Njikere? Lee, ahhh! Ọ na-ekpo ọkụ ebe a? Phew! Nwa nwoke, anyi no n’agwaetiti nke okpomoku.
Ọ na-nwayọ nwayọ, ọ na-enwu ọkụ. Dowe uwe gị! Ha! Yabụ, nke ahụ dị ezigbo mma. Ọ dịtụghị mgbe m chere na m ga-enwe TV na nnata.
ethernet USB na-achọpụta
Ọfọn, ọ bụghị naanị maka ijikọ eletrọniki gị. Site na ịgbakwunye, uh, ìhè Philips, ọ bụ nnọkọ! Ee, ị nwere ike ịchịkwa. Nwere ike ijikwa ekwentị gị ijikwa ọtụtụ n’ime ụlọ gị.
Ziri ezi? Ọ dị mma! Freaky! Freaky! Ọ bụ $ 149.99 na Best Buy. Ọ ka tọhapụrụ na Machị 23rd, ya mere ọ ka dị ọhụrụ.
Mara mma gadget ka ndị enyi gị. Eeh, ọ dịkwa mma, ọ bụrụ na ị na-eji ọtụtụ ngwa TV ama amamịghe gị, ọ bara uru. Know mara, na-atụtụghị na remote maka na.
Keyboard nwere akara ngosi QWERTY zuru ezu ebe a. I nwere oke. Anyị nwere cursor.
Anyị amadịghị na anyị nwere cursor na TV anyị ruo mgbe anyị tinyere ya. Na, ee, inwe ike ịkọwa ma pịa ya, Amazon Prime Video, Netflix, ihe ndị a niile na-arụ ọrụ dị ukwuu na ihe a na smart TV, mana ị nọ na ngwa kama keyboard ahụ ka ha nọ n'ebe ndị ọzọ, ị nwekwara ike iji kiiboodu na ngwa ahụ. Ọ dị mma, naanị otu ihe, ọ bụrụ na gị na di ma ọ bụ nwunye gị enwe nghọtahie banyere ihe igosi ekiri, ọ nwere ike ịbụ nsogbu n'ihi na enwere m ngwa, ọ nwere ngwa.
Anyị nọ na-agha ihu na azụ. Mgbe ahụ Michael na-amalite ịpị bọtịnụ ma anyị na-ele DisneyJr. Ya mere, naanị ịdọ aka ná ntị.
Achọrọ m okwu ikpeazụ n’isiokwu a, yabụ ọ bụrụ na ị masịrị isiokwu a, nye ya mkpịsị aka. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko hapụ otu echiche n’okpuru. Ndenye aha n'ihi na anyị na-enwekarị isiokwu tech.
Ana m agbalị ịkwadebe nwoke a maka ịba ụba. Ọ na-atọ ọchị n’onwe ya. Ekwere m gị nkwa.
Abụ m mkpu, huh! Yabụ, aga m elele gị ma emechaa. Aga m ahụ gị na Wednesde na-abịa. Ehee!
Ndi Logitech Harmony na PC aru oru?
Njikwa.MmekọrịtaSmart Keyboard nwere ike ịrụ ọrụ ọfụmaWindows PCkiiboodu, ọtụtụ ngwa ga-enye gị ohere iji ekwentị mkpanaaka gị maka ọrụ njikwa. ... N'ihi naWindowsNdị ọrụ 8,MmekọrịtaSmart Keyboard na-akwado swipe na omume taabụ.
Ọụ nke eluigwe na ala. Onye na-enweghị mmasị ile anya site na ntuziaka ntuziaka na font 4-point na-anwa ịchọta akara 5-nọmba nke nwere ike ma ọ bụ na ọ gaghị adaba na ụdị TV gị ma na-ejide ọtụtụ bọtịnụ na ntanetị gị iji tinye ya na usoro mmemme, pịnye na koodu 5-pere mpe nke pere mpe na-ezighi ezi ma ghaafue uzo ozo ozo? Echere m na ị kpọrọ ihe ... onye na-enweghị obi ụtọ ime nke a? Universal remotes abịawo ogologo ụzọ ma ugbu a, enwere ike ijikọ ya na ụlọ gị nwere ọgụgụ isi na ndị na-enyere gị aka.
gbanyụọ stereo mix
M guzobere ụlọ ọrụ Logitech Harmony na ebe dịpụrụ adịpụ na sistemụ egwuregwu atọ dị iche iche jikọtara ọnụ na Amazon, Google, Philips Hue na Smartthings Ee, ị nwere ike nweta mmetụ Harmony ka dị mfe nke dịkwa ọnụ ala ma mee ka ị gbanwee ngwaọrụ ntụrụndụ ụlọ gị niile na igwe akuko. nke a otu bọtịnụ, ma Harmony J.Randall na-ewe na ahụmahụ na-esonụ larịị, otu n'ime ndị mbụ Onye nke kasị nwere ọgụgụ isi ngwaọrụ m na mgbe zụtara bụ a Harmony eluigwe na ala na kpamkpam gbanwere ụzọ m na-ahụ eluigwe na ala remotes. Nke a bụ mgbe Harmony bụ obere ụlọ ọrụ Canada na tupu Logitechin azụọ ya na mbido afọ 2000. Ihe edobewo Harmon na-ewepu oge niile site na ọdịnala ọdịnala ụwa niile enweela ịdị mfe ntọala na ikike nke remotes iji soro akara ngosi gị ma gbanwee ntọala sistemụ ntụrụndụ na ntinye site na iji otu bọtịnụ.
Ọbụna na ọnụ ala dị ala ọnụ ala, ị ka ga-ejikwa aka gị TV -> Ike, DVR -> Ike, wdg ruo mgbe ị nwere ihe niile edozila ka ịchọrọ. Have nwere smart TV, Xbox, PlayStation, Apple TV, igbe USB, ihe ọkpụkpọ Blu-ray, ụda ụda, ma ị na-agbanye 6 ma ọ bụ karịa ma ọ bụ karịa ma ọ bụ na-atụgharị anya na nke a na-emegharị anya, ogbi zuru ụwa ọnụ, nke kachasị mfe nke Harmony remotes mee ihe a niile na aka bọtịnụ.
Pịa bọtịnụ 'Watch TV' na ihe niile ga-adị ndụ n'onwe ya, gbanye onwe ya ma gbanye ntinye. Ka anyị ghara ichefu ihe kachasị mkpa: nnwapụta ezinụlọ. Ka m na-etinyekwu ihe n'ihe nkiri anyị, ka ọ ga-ewute nwunye m karịa.
Ebe dị omimi nke zuru ụwa ọnụ bụ nchekwa alụmdi na nwunye. Ha makwaara na mgbe ọ natara akara nnabata site na nne na nna, ọ na-arụ ọrụ siri ike. Ndị mụrụ m abụghị ndị maara ihe na teknụzụ ma jiri iyi Logitech Harmony remotestoo swearụọ iyi.
Ọtụtụ ịhọrọ site na! Ihu ọma, ị nwere ike iji remotes dị ka Logitech Harmony 350 (https://amzn.to/2RlkO4D) ma ọ bụ 650 (https: / / amzn. To / 2TUYZuk) ($ 25- $ 50), mana ọ bụrụ na ịgbanwere ebe dị anya , nke ga-agụnye a ehiwe, dị ka Harmony Companion (https://amzn.to/2PxKOYP) na Harmony Elite (https://amzn.to / 2Le9m8M), ọnụahịa ahụ na-eme nnukwu ịwụ elu ($ 100- $ 300. .. ị nwere ike ịchọta mgbe niile nnukwu azụmahịa na azụmahịa maka ihe dịka $ 250), mana ọrụ agbakwunyere na ịdị mfe iji nwere ike ịdị ọnụ ahịa karịa.
The Logitech Harmony J.Randall na-abịa na a ehiwe dị na gị ntụrụndụ center. Nke a bụ ụbụrụ nke ihe niile, ọ na-ezipụkwa akara ngosi infrared nke na-ejikwa ọtụtụ ngwaọrụ ntụrụndụ dị ka DVR na TV na ijikọ na ọtụtụ ngwaọrụ Bluetooth dị ka PlayStation 4 na netwọki WiFi gị. Enwere ọbụna ọtụtụ ọgbụgba igwe ọgbụgba IR ị nwere ike ịgbakọ ọnụ iji kpuchie ngwaọrụ ndị na-adịghị na akara na ọnọdụ nke hub.
Nke a pụtara na ị nwere ike zoo ngwaọrụ gị niile kama ịtụ aka na ntanetị ga-eme ka ha rụọ ọrụ. Na ime ụlọ ndina m, enwere m ọtụtụ ihe dị na kọlọtọ zoro ezo. Njikwa a gụnyere gụnyere iji redio ugboro ugboro jikọọ na ehiwe ma nyekwa iwu, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị gbasara ịtụrụ aka n'otu ebe.
Nke a nwere ike bụrụ nsogbu na njikwa njikwa ọdịnala IR dịka Logitech Harmony 350 ma ọ bụ 650 dị ka kọfị kọfị na-eziga mgbaàmà na DVR gị ma enweghị ike ịgbanwee ya na ọnọdụ ziri ezi, mana TV na ampilifaya na-agbanye nke ọma. Nke a ga - eme ka ọnọdụ ahụ pụọ na mmekọrịta yana ihe ọ bụla dịpụrụ adịpụ agaghị achọpụta na ihe agbagoro. Ọ dabara nke ọma, Harmony nwere bọtịnụ Enyemaka nke ga-ezigharị iwu IR maka ọnọdụ ị nọ iji nyere aka dozie ọnọdụ ahụ.
Otú ọ dị, nke a anaghị emekarị na usoro dabeere na ehiwe. Ozugbo ọ melite ma na-arụ ọrụ, ọ na-arụ ọrụ. Kwesighi ichegbu onwe gị banyere ahịrị anya ọ gwụla ma ị na-ebugharị ihe na ntụrụndụ gị.
A ehiwe na-enye gị ọzọ ụzọ ịchịkwa usoro. Nwere ike ibudata ngwa Harmony na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị ma jiri ya dị ka njikwa. Ou nwere ike iji Amazon Echos rụọ ọrụ Amazon Echo Skill iji jiri iwu olu maka usoro gị dị iche iche.
Otu ihe a na-emetụta ụlọ ọrụ Google dịka Google Home Mini ma ọ bụ Google Home Hub. N'ezie, Homelọ Ọrụ Google na-enye gị ụfọdụ njikwa anya dị mma nke ọma maka igwu egwu na ịkwụsịtụ. na olu na hub onwe ya.
Mgbe mbụ m setịpụrụ nke a afọ ole na ole gara aga, nwunye m chịrị m ọchị ma hụ na iwu ahụ na-akwa emo. Ọ dịkarịrị mfe iji igwe eji arụ ọrụ, ọ bụghị ya? Ọ dabere na ọnọdụ ahụ. Nwunye m bịara na-achọpụta na ọ nwere ike ịgbanye ụlọ ihe nkiri nke ụlọ site na kichin ma mgbe ọ banyere n'ime ime ụlọ ya na nri ya na TV na-eche ya ka ọ dị njikere ịga ọ bụ ezigbo ihe dị mma.
Otú ọ dị, otu nnukwu ndudue bụ na njikwa olu nwere ike jikọọ naanị n'otu ebe. Yabụ ọ bụrụ na inwere 2 ma ọ bụ 3 dị ka m na-eme, ị ga-ahọrọ nke ehiwe na-enweta akara olu. Logitech weputara nke abụọ Amazon Echo Skill iji nweta ụlọ ọrụ nke abụọ na-arụ ọrụ n'otu oge, nke dị mma, mana ụdị ụzọ dị egwu iji dozie nsogbu ahụ.
Gini mere igbanwe ya ka igani igwa Amazon ma obu Google nke agha bu iwu? Dị ka, 'Hey olu nnyemaaka, gbanye TV na ime ụlọ ahụ?' I nwekwara ike mmemme na okwu omenala maka ọwa pụrụ iche ka ị nwee ike ịrịọ Amazon ka ọ gbanye ABC ma ọ bụ CBS ọ ga-agbanye TV ma tinye nọmba ọwa kwesịrị ekwesị na TV ma ọ bụ igbe USB. Agbanyeghị, nke a anaghị arụ ọrụ maka ịmepe ụfọdụ ngwa na ihe dịka Apple TV ... enwere ụzọ ụfọdụ iji mee nke a site na ịmegharị nhọrọ ihuenyo gị na-akpaghị aka oghere ole na ole oge ọ bụla ịmalite ọnọdụ ahụ, mana m ga-achọ nke a na -enwekarị njehie, akwadola bọtịnụ ma ọ bụ iwu ka ịmalite ihe dịka Netflix, ị kwesịrị inwe ike iji nke ahụ wee mepụta ọrụ 'Watch Netflix'.
Nke a ga-aga Roku, nke na - enyere gị aka ịmalite ngwa dị ka Netflix, nwere ike jikọọ ebe gị na Amazon, Google, Philips Hue, Nest, Ecobee, Lutron, LIFX, Smartthings ... dịkwa mma, ị nwetara isi ... ọ bụ ihe niile.
Ozugbo ị malitere ijikọ ọrụ ụlọ dị mma na ebe obibi gị, ọ na-emepe ọbụna ohere ndị ọzọ maka usoro akpaaka. Enwere m ndụ m Igwe ọkụ ụlọ na-akpaghị aka mgbe m gbanye TV mgbe anyanwụ dasịrị. Gbanwee ọnọdụ ahụ ka 'Lelee ihe nkiri' na ọkụ ga-agbachi ka ọkwa nlele ihe nkiri kwesịrị ekwesị.
Nwere ike itinye Harmonụ n'ime usoro ụlọ amamịghe, dị ka usoro 'Z', na ụlọ nke gị agaghị emechi ọkụ, kpọchie ọnụ ụzọ, ma gbaa mbọ hụ na agbanyuru TV na ngwaọrụ ndị ọzọ. Otu ihe a metụtara ịhapụ ụlọ ntanetị, nke ị nwere ike ịgbanwe ọkụ ma ọ bụ ntọala na otu pịa. Maka m, enwere m otu bọtịnụ maka ime ụlọ ọkụ na nke ọzọ maka ọkụ n'èzí n'ihu ụlọ m.
Ndị a na-abata n'aka mgbe ịkwesịrị ịgbanye ọkụ ọkụ ụlọ dị ndụ mgbe ị na-ekiri ihe nkiri, ma ọ bụ gbanyụọ ọkụ ndị dị n'èzí mgbe ọ na-adọpụ uche ya na ọ dịghị mkpa ka ị na-anwa ilekwasị anya na ihe omume kachasị ọhụrụ nke ndị ọbịa. Tọlite ​​Haritech Harmon abịawo ogologo oge kemgbe mmalite ụbọchị, yana maka ngwaahịa Logitech Harmony Hub dị ka ndị Elite, ị na-etinye ngwa ahụ na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba gị ma soro ntuziaka ntọala mbụ. Nke a ga-ebufe gị ehiwe na ime akara gị WiFi.
Mgbe ahụ, ị ​​ga-melite niile nke dị iche iche na ngwaọrụ na ị chọrọ ịchịkwa. Maka ihe dịka TV, naanị ihe ị ga - eme bụ itinye ntinye na akara ngosi yana ihuenyo nnabata ga - egosi na nhọrọ sitere na nchekwa data Logitech Ozugbo ị setịpụrụ ngwaọrụ gị, ngwa Harmony ga - ajụkarị gị Achọrọ ịme ihe na-akpaghị aka dabere na ngwaọrụ ọhụrụ ị gbakwunyere, ọnọdụ ọrụ akpaka a abụrụla ihe na-akụ ma ọ bụ na-atụ uche m ka m wee ghara ịsị na-ekele ma melite ọrụ m.
skype kwuru ejikọta
Ihe omume bu ihe dika 'Ikiri TV', 'Ikiri Blu-ray', ma obu 'Xboxkpọ Xbox'. , 'nke ị tinyeziri ngwaọrụ na ọrụ a. Maka m enwere m 'TV' na LG TV, Denon erite na Apple TV dị ka ngwaọrụ.
Tell na-agwa ya nke ngwaọrụ na-achịkwa olu, nke ntinye ngwaọrụ ọ bụla ga-edozi (HDMI 1 na TV ọdịyo m na TV na Denon erite). Kwenye na ị nwere ike ịhụ ma nụ ihe niile n'ụzọ ziri ezi. Mmetụta ga-ajụzi ma ịchọrọ ịgbakwunye ngwaọrụ ụlọ amamịghe na ọrụ ahụ.
N'ebe a ị nwere ike ịtọ ọkụ ọkụ, dị ka Philips Hue, iji gbanye ọkwa na agba ụfọdụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwụsị ya n'oge nke ụbọchị, yana ihe ọkụ ndị ahụ kwesịrị ime mgbe ị rụchara ọrụ ahụ. Chọrọ ịhazi bọtịnụ na remote? Enweghị nsogbu, họrọ bọtịnụ ahaziri bọtịnụ nke njikwa gị na mpaghara menu 'Remote & Hub'. Ebe i nwere ike imeghari ọrụ nke ndị a Home Control bọtịnụ maka niile eme ma ọ bụ ọbụna imeghari ha maka ụfọdụ eme.
Họrọ bọtịnụ na foto a, wee kenye ihe bọtịnụ ahụ kwesịrị ime. Ọ bụ ezie na ọ dịtụ mfe ịtọlite ​​ihe ndị a niile, m ga-asị na UI nke ngwa ahụ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe mgbagwoju anya. Iji nweta site ọkachamara ntọlite, ị ga-enweta akụ n'ihu ma ọ bụ azụ azụ na elu ihuenyo, nke na-abụghị a nkịtị interface imewe na ike na-agbagwoju anya.
E nwekwara ogologo oge mgbe ị na-enweta akụ ọ bụla dị ka ngwa ahụ na-eche nzaghachi site na sava Logitech. Igbu oge nwere ike mgbe ụfọdụ ọ dị ka ngwa ahụ araparawo mgbe ọ na-arụ ọrụ, mana nsogbu na-ejedebe na ngalaba ntọala nke ngwa ahụ. Ọrụ njikwa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ karịa ma dị mfe iji, yabụ iji ya kwa ụbọchị dị mma.
Ikpeazụ echiche Logitech Harmony remotes abụrụla ọkọlọtọ maka usoro ime ụwa niile, ma enwere ezi ihe kpatara ya. Ha na aru oru. Eeh, ha nwere ike bụrụ ndị anaghị akwụ ọtọ, mana ozugbo ị mere ha, ha na-arụ ọrụ ntụkwasị obi ma bụrụ ndị ezinụlọ.
The Harmony ntinye-larịị remotes bụ nnukwu mmelite n'elu ihe izugbe-eburu set-elu na kwa ụbọchị remotes, ma Harmony si ehiwe dabeere remotes na-eme ọbụna ndị a remotes anya lackluster. Enwere ndị ọzọ dị anya na-eme ihe dịka Neeo (https://neeo.com), Ray Super Remote (https://www.ray.co) na Caavo (https: //caavo.com) mana ha anaghị Enweghị ụdị ndepụta ngwaike ngwaike dị otu a, yana njikọta dị na teknụzụ ụlọ amamịghe.
Maka 'gburugburu' ọ na - arụ ọrụ na ihe ọ bụla 'ị nweghị ike ịgahie na Logitech Harmony Companion ma ọ bụ Elite. Ọ bụghị naanị na ọ na-edozi ọgba aghara gburugburu ntọala ntọala ụlọ ihe mgbagwoju anya, mana ọ na-agbakwunye ụfọdụ ezigbo mma dị mma na ekwentị gị na ụlọ mara mma. Ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị, jide n'aka na ị ga-enye ya mkpịsị aka gị wee kwuo n'okpuru ebe a ụdị ụdị remotes ị na-eji yana ma ị tinyela ha n'ime ntọala ụlọ dị mma.
M nwere Amazon Mgbakwunye njikọ niile nke remotes, ihe m kwuru banyere ya na nkọwa ahụ agbakwunyere. O doro anya na achọrọghị, mana iji njikọ ndị a ma ọ bụrụ na ị na-eche ịzụrụ otu n'ime ndị a ga-enyere aka kwado ọwa ahụ ma kwụọ ụgwọ ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ịnweghị, tụlee onwe gị ịdenye aha ma pịa mgbịrịgba ngosi iji nweta ọkwa mgbe m biputere ihe ohuru. Na dị ka mgbe niile, na-ekele gị maka ikiri ma hụ gị n'isiokwu na-esonụ.
Nwere ike Imekọrịta akara ntanetị Windows 10?
Ikwesiri iji yaMmekọrịtangwa maka iOS ma ọ bụ gam akporo ijikọ gịn'ime obodoiji kọmputa – ọ gaghị arụ ọrụ site nadesktọọpụMyHarmony sọftụwia. ... won't gaghị enwe ikenjikwaọ ruo mgbe i tinye ihe na ya, ebe ọ bụ na ọ bụ otu gịn'ime obodoabụọ na kọmputa gị. Họrọ nke giWindowsKọmputa site na ndepụta nke ngwaọrụ.Ọkt 27 2017
hey onye obula, nnabata na t4 show myname bu Michael mana taa anyi no oninbox iji tunyere Harmony 1100 di anya site na Logitech na nwanne ya nwanyi theHarmony one na dika i huru ebe a, enwerem Knife Unboxing Unboxing, onyinye kacha mma nke oge nile dị ebe a site n'aka nri anyị nwere Mmakọ. Onweghị ihe dị njọ na Harmonyone, mana Jeff Farina si Simulcastand bụkwa Ultima n’otu abalị na Twitter wee kpebie ịzụta Harmoni ahụ, wee kpebie ịzụ ya maka Harmony 1100. Onweghị ihe dị njọ na njikwa dị n’etiti, ọ bụ ezie na ọ bụ nnukwu ime njikwa, dị nnọọ nkwalite na ya ka anyị bido nke ahụ bụ onyinye ọzọ kachasị mma meghere emeghe, ihe mere m ji kwuo nke a bụ n'ihi na enweghị m ọtụtụ nsogbu na igwe okwu lapel enwere m teknụzụ ọdịyo yana iri itoolu na otu caliber bepụrụ ọkara nke isiokwu a n'ihi ihe ụfọdụ ya mere m kpebiri na m dub ya na theMXL vv9 mgbe iMovie bụ ndị dị otú ahụ a bara uru dubbing ngwá ọrụ na ọ Ọ bụ Harmony 1100 dịpụrụ adịpụ, e nwere ebe a na-agbanye ụgbọ mmiri maka ya, ọ nwere mmetụ aka nke ihe dịka na Nexus Otu, yabụ na ị naghị etinye ya n'ụzọ nkịtị na obere ọdụ ụgbọ mmiri ala na ala ka ọ dabara nnọọ na nke a bụ ezigbo njikwa ntanetị, mana anyị na-agabiga ebe a ma wepụ wires dị ka eriri USB , nke ahụ bụ ebe ike dị na n'okpuru th e ntụziaka ntuziaka det bụ batrị na ị chọrọ ikwunye ya na m plugged ya na mpụga igwefoto Nke a bụ ọnọdụ ahụ, akụkụ anụ ahụ nke ime akara, a pụtara ibu ihuenyo na Harmony 13.5 inch na LCD ihuenyo na e nwere ihuenyo mmetụ na mara mma nke ukwuu ihe ị na-ahụ na-eme n'ebe ahụ.
Enwere olu na olu njikwa nke siri ike, enweghị mmetụ ihuenyo. Go na-alaghachi n'otu ọwa site na eriri wee nwee ihe nkiri 4 gị na ihe dị mma wee nwee nke ahụ na ala na menu dị ebe ahụ ma ị nwere bọtịnụ ọrụ na-agbadata ala nke m na-agwa gị gbasara dabara na ngwụcha nke A na-egosi na ọ na-emegharị azụ ebe ahụ. Nke a bụ njikọta ya na njikọta RR dị, nke na-akwado RF yana onye mgbatị, nke na-efu obere ego.
Nwekwara ike inweta Harmony 900 nke na-efu ihe dịka nke a ma tinye RF, mana m na-ahọrọ nnukwu mmetụ ahụ na nke a dịka ụdị ụfọdụ ọ bụ karịa ihe geek na enwere ọdụ ụgbọ mmiri USB You sonyere iji melite na mee ihe ndị a niile anyị ga-eme mgbe isiokwu a gasịrị, kedu ihe m bụ, ọ bụ ezigbo ihe mgbu na ịnyịnya ibu maka ntọala izizi ya na Mac mana nke a bụ Nkwekọrita ị chọrọ nke a bụ nnukwu ime na ebe ahụ bụ ọrụ maka comcast na ịkpọ Xbox 360 nke m nwere ike ịhụ ma m nwere ike ịgbanwe ebe ahụ. N'ezie m enweghị ike ime ya, nke ahụ bụ ihe ọzọ na-apụnara mmadụ ihe ọ chọrọ iji melite a ohuru akaụntụ maka 1100 ma ọ bụ na ị ga-akpọ Logitech na-eme ya na ha aka na ekwentị m na dị nnọọ kpebiri nwere ohuru Akaụntụ ya mere ndị a bụ abụọ dịpụrụ adịpụ, Harmonyone bụ nnukwu ọnọdụ ma ana m atụ anya hop 1100. Mgbe ntọlite ​​ahụ, nhazi ahụ ruru ya, ọ bara uru na ya n'onwe ya, ya mere, lee abụọ ndị a Enwere m olile anya na Jeff dị ka ọ kpatara m ga-anwa ịnụ ụtọ 1100 a ebe a na nke a bụ ezigbo ọnụ ahịa m na amazon na ọ dị obere na m nwetara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ $ 100 obere m chọrọ ikele ha maka nke ahụ ma ka anyị lelee isiokwu ahụ site ma melite wee hụ ihe na - eme, ị ga - ahụ ihe na - eme, ọ dị mma ebe a anyị nọ na desktọọpụ m ma nke a were ogologo oge karịa ka o kwesiri ma ọ ruru ebe m chọrọ ịlaghachi Harmony 1100 na ga emewo Harmony One ma obu Harmony900 nke yiri nke Harmony 900 ma ya na RF mana o chighariri apụ na mgbe usoro ole na ole gasịrị, enwere m ike ịhazi ya, ndị a bụ usoro m jiri dị ka ị nwere ike ịhụ ala ebe a n'elu n'elu mbụ ị ga-ahụ ebe etiti m nwetara ihe niile edoziri mana nke ahụ bụ njedebe nke ihe mere ihe mbụ m ga-eme bụ ala ebe a gaa na netwọk na m usoro ntọala na melite a ọhụrụ ethernet njikọ, nke m bụ medor1100 na mgbe mbụ m nwere ga-abanye na adreesị IP na ebe a na subnet nkpuchi na rawụta aka.
Agara m na logitech forums ma chọpụta na ọ naghị arụ ọrụ, yabụ m setịpụrụ onwe m na akpaghị aka ma nye m ntọala ndị a na akpaghị aka, ya mere ọ gbanwere na nzọụkwụ nke abụọ dị mma, ọ bụrụ na ị gaa ebe a ị ga-eji n'efu mmalite mode nhọrọ ngwa. Can nwere ike google wee chọta ha. Maka ihe ụfọdụ, Harmony 1100 kwesịrị ịmalite na ọnọdụ 32-bit ma ana m ekwu na ọ naghị arụ ọrụ na ọnọdụ 64-bit, ọ kwesịrị ịrụ ọrụ na ọnọdụ 32-bit ka m wee laghachi n'ọnọdụ 32-bit, ka melite ya ka m mechara bia ebe a ma ya na ndi ime obodo a kwurịtara okwu ma na ngwụcha m guzobere myComcast na Xbox 360, ee, enwere m ezigbo obi uto na ime mana o were m oge iji nweta ime oyuyo Ya mere odi mma ọtụtụ nchọpụta nsogbu tupu oge eruo, Ọbụna m ga-edozi ya mgbe m na-aga.
Ruo ugbu a ọ dị mma, enwetara m ngwaọrụ m niile na ihe omume m wee chee na ihe dị mma bụ ịhazi bọtịnụ ọ bụghị naanị ndị a, mana setịpụrụ m obere ọkacha mmasị m. M ga-aga ntọala ebe a ma enwere m ike ịwụnye ọwa kachasị amasị m yana dịka ị hụrụ ebe a enwere m ọwa niile ebe a ma enwere m peeji anọ m nwere ike iji ya wee nwee ọkacha mmasị m isii ebe a wee nwee ike ịgbakwunye atọ ọzọ peeji na saịtị m gara bụ nke m na-enweghị ike ịkpọ ma ị nwere ike ịlele ya ma buru ụzọ pịgharịa gaa ma ọ bụ karịa ka mma ma chọọ ọwa gị niile ị nwere yana naanị ebe a na Drag desktọọpụ na ị nwere ike lee anya na m nwere ihe ndia nile ebe a uzo gi nke m mere maka comcast ka anyi kwuo ka m gaa 208 ihe obula a na akpo ya itespn2 mgbe ahu m ga ahota oyuyo a maka ihe obula kpatara gi a fox fox niile m nwere ike ilegharị gaa na desktọọpụ niile Niile ala m na-eji Spike TV, ị họrọ foto a ma gbakwunye ya n'akụkụ ebe ahụ na peeji nke abụọ Ọ bụrụ na m wepụ ya n ga-achọ ka ọ mara mma dị mfe naanị na ahịhịa nwere ike akara ngosi ma ebe ahụ anyị ga-akagbu ị ga-eme na otu ihe maka 360 ma ọ bụ ihe ọzọ, mana m chere na ọ dị ezigbo mma na r a na-egosi na m nwere ọkacha mmasị ndị a na mgbakwunye nwere ike ịnweta ezigbo ala nke m na-enweghị na Harmony kama ọ bụ naanị otu ntanye na ntọala izizi mbụ maka 11-narị ma ọ bụrụ na ị jiri ya na Mac OS10 Point 6 Snow Leopard ọ ga bụrụ nnukwu ihe mgbu na ịnyịnya ibu ka a dọọ gị aka na ntị, n'agbanyeghị na ugbu a, ka anyị wepụ, mee nnwale ndụ ebe a plọg Ramon, lee anyị nwere onye enyemaka dịpụrụ adịpụ ebe a ebe a achọghị m ka ị nwee ike ịhụ nke a, enwere m ọrụ ahụ agaba ebe a lee igwe onyonyo ma ogaghi agbanwe n'ihi na o dighi atule TV kama achoro m iweta akara ngosi icho ka ha bia ugbua. Ka anyị kwuo na igwefoto na-atụ aka na TV Gịnị Comcast remover dị ka ọ na-aga n'obi ma ị ga-eme ihe niile ahụ.
Ka anyị lee ebe ọkacha mmasị dị, enwere ọnụọgụ ma gbalịa ịchọpụta ebe ọkacha mmasị bụ nke ga-enyere aka, ikekwe ejighị n'aka, nke ahụ bụ ihe ọzọ dịpụrụ adịpụ wee kpọọ ọkacha mmasị n'ihi na ugbu a amaghị m etu Ọrụ ahụ na ọ dịkarịa ala na-arụ ọrụ, nke a bụ Harmony 1100 m ga-enye ya n'ihi na m na-amụta etu esi eji ngwaọrụ ahụ, yabụ maka onye ọ bụla nọ ebe a na c4show ekele na ọdịmma kachasị mma na ndị mmekọ nke Harmony 1100 na ndị ọrụ ogologo oge.
Kedu ihe kpatara na my Harmony remote jikọọ na kọmputa m?
Kwenye naiheUSB cable bụjikọọ na ime gịn'ụzọ kwesịrị ekwesị. Gbalịa ịmalitegharịakọmputa gị. Gbalịa ịmalitegharịaIhe nkedo dịpụrụ adịpụsite na ijideihebọtịnụ ike maka 15 sekọnd. Gbalịa ịtọliteime obodo giejikaiche ichekọmputa.
Ọ bụ ihe ọ andụ na taa m ga-anwa ịtọlite ​​ihe ntanetị m iji rụọ ọrụ na igbe mpaghara m. Maka ebumnuche ụfọdụ enweghị m ike ịchọta igwe ntanetị m Roku 3, ịntanetị anaghị arụ ọrụ ebe ahụ ma achọrọ m ijikọ ọzọ na agbanyeghị na m nwere Roku? Na smartphone m ọ gaghị ejikọ n'ihi na ejikọtaghị ya, jikọtara ya na wi-fi ka ọ na-arụ ọrụ ya mere m ga-agba mbọ ịhụ ya taa enwere m njikọ site na nke m Enwere m Logitechmy Logitech 650 remote ọtụtụ remotes enwerem? M na-adịghị n'ezie na-eji ọ bụla mode na-ahụ ma ọ bụrụ na nke a na-arụ ọrụ m, otú ahụ ka m chọrọ ga-esi n'ime nke a software ozugbo na-emeghe ya. Aga m etinye myharmony maka njikọ USB m ka ịpịnye ya ebe a na achọrọ m ịme ihe ntanetị iji hụ ma nke a ọ ga-arụ ọrụ, sọftụwia m abụghị maka ihe kpatara ya na ebe a anyị ga-emepe ihe ngwanrọ ọ na-achọ maka.
Ọ dịghị onye ngwanrọ mepere ma m na-ekwu na m bụ ngalaba ebe ị nwere ike itinye ihe ntanetị dị ka m wee pịa ihe ọzọ dị ka m pịa ngwaọrụ m wee pịa Ngwaọrụ m apụ m tinye ngwaọrụ n'ihi na ịnwere ike ịgbakwunye ngwaọrụ ise ebe ahụ na ha na-ahụ emeputa na m ga-eme ya na ụzọ na mgbe ahụ m ga-ahụ ngwaọrụ nlereanya Nomad nlereanya nọmba bụ anọ abụọ efu efu X na nke ahụ bụ na nke ahụ bụ maka Roku atọ m kwesịrị ịdị na pịa iji tinye ihe niile remote njikwa radio frequency telex, teknụzụ nke nwere ike ijikwa mgbidi dị iche iche ma ọ na-egosi na ha nwere ngwaọrụ anọ na mpụga ebe a, lee anya na ị na-egosi otu ndị atọ ebe a ka m pịa nkume atọ na menu ma eche m na anyị nwere ike inwe ihe ohso, ọ na-arụ ọrụ oh mara mma ya mere ugbu a na anyị na-arụ ọrụ na m nwere ike ịga mwube m na-aga m na netwọk na mgbe ọ na-ejikọ m netwọk, melite a Wi-Fi na ọ na-arụ ọrụ ugbu a, nke a bụ otú jụụ ọ dị mma ruo ugbu a na nke a bụ ihe m chọrọ ime, nke na-agbalite netwọkụ m ọ bụghị ụgbụ m ọrụ site na nke a gwara ka melite smartphone remote now na anyị nwere anyị network melite
Kọmputa kwekọrọ na Windows 8 ọ dabara?
Harmony Smart Keyboard nwere ike rụọ ọrụ dị ka arụ ọrụ Windows PC arụ ọrụ, ọtụtụ ngwa ga-enye gị ohere iji ekwentị mkpanaaka gị maka njikwa njikwa. Edepụtara n'okpuru bụ ụfọdụ ngwa Windows na-ewu ewu na ụzọ iji chịkwaa ha site na iji Harmony. N'ihi na Windows 8 ọrụ, Harmony Smart kiiboodu na-akwado swipe na taabụ omume.
Need chọrọ Bluetooth maka iji kwekọọ Keyboard Smart?
Dika Harmony Smart Keyboard na enye iwu site na Harmony Hub, a gha agha igba agha agha oge niile. Ọ bụrụ na otu n'ime ngwaọrụ gị enweghị ike Bluetooth, a ga-etinye USB erite na USB USB iji mee ka ntinye ederede.
Olee otu m ga - esi mepụta ụzọ mkpirisi keyboard maka nkwekọ?
Configwametụ ụzọ mkpirisi Windows Na PC gị, mepụta ụzọ dị mkpirikpi na mmemme ọ bụla ị ga - achọ ịmalite site na Harmony wee pịa ya. Họrọ Njirimara ma pịa igodo ụzọ mkpirisi ụzọ, tinye ya na Ctrl + Alt + 1, Ctrl + Alt + 2 ma ọ bụ Ctrl + Alt + 3. Tinye usoro na mbido ọrụ Windows gị, na-ahọpụta ụzọ mkpirisi keyboard maka Windows dị ka iwu ọhụrụ.
Kedụ ka m ga - esi chịkwaa kọmputa m site na iji Harmon remote?
Mgbe ịtinye Windows dị ka ngwaọrụ, ịkwesịrị ịmepụta Watch PC Ọrụ ma hazie ya iji jikwaa Windows na Harmony remote. Ga-achọ ime mgbanwe ndị ọzọ, nke a tụlere na ngalaba a, iji jikwaa Windows na Harmony n'ụzọ zuru ezu.
na-agba ọsọ egwuregwu japan
Egwuregwu japan na-agba ọsọ - ngwọta ga-ekwe omume
Kedu ihe mere ekweisi m ji eme mkpọtụ? E nwere ọtụtụ ihe na-akpata oke mkpọtụ na isi okwu. Otu n'ime ihe ndị kpatara kpatara ya bụ nnyonye anya eletrọniki. E wezụga nke ahụ, okwu ngwaike nwere ike ibute ụda na-ada ụda site na ekweisi. Na mgbakwunye, ihe gbasara sọftụwia, dịka nrụrụ aka ọkwọ ụgbọala nwere ike ibute okwu a.
na-agba ọsọ cursor virus
Jump cursor virus - ajụjụ nkịtị
Kedụ ka m ga - esi mepụta Saịtị na Visio? Nweta map saịtị Weebụ Malite Visio.Na ngwanrọ na ụdị data, pịa Web Site Map. Nyochaa ọnụ ọgụgụ kachasị nke ọkwa na ọnụọgụ nke njikọ ga-achọpụta. Iji hazie nchọta weebụsaịtị gị, pịa Ntọala ma mee nke ọ bụla na-eso: ... Na n'ịwa n'Sitentanet Map igbe, pịa OK.
wudfhost.exe ebe nchekwa ihihi
Wudfhost.exe ebe nchekwa ihihi - viable solutions
Gini bu onye nchikota data DVD? DDVDataCollector.exe bụ faịlụ a na-arụ ọrụ nke nwere akụkụ nke usoro ihe omume Dell Data Vault nke Dell Inc mepụtara .. Sọftụwia a na-enwekarị ihe nha 8.04 MB. The .exe ndọtị nke faịlụ aha na-egosiputa executable faịlụ. Mgbe ụfọdụ, faịlụ ndị nwere ike imebi kọmputa gị nwere ike imebi kọmputa gị. 2019